SEHATRY NY ANKIZY - ANGANO
Santionany vitsivitsy amin'ny :
ANGANO MALAGASY - CONTES MALGACHES
Andy et Feno vous invitent à partager les contes merveilleux qui ont bercé votre enfance. Pour vous introduire dans un univers de nostalgie, de la magie et de l'imagination. Et qui reflètent la culture et la sagesse de nos ancêtres.
Rehefa mitantara angano i Nenibe na i Neny, tsy tonga hatramin’ny farany akory dia efa resintory mirana ao ambany heliny ny ankizy madinika.
Ary ho fahatsiarovana manokana an-dRamatoa Rasoanalina G. nampita ny maro tamin'izany hatrany aloha tany.
Ny pejin'ny ARIRA kosa dia angano roa sy sary nalaina tao amin'ny boky nosoratan'Andriamatoa Prosper Rajaobelina, Arira nandrotsy ny fahazazana: Ikoto sy Ikalo- Tsingory
NY TRONDRO ADALA SY NY TRONDRO HENDRY :
Nifalihavanja tsy nisy mpanelingelina tao amparihy ny trondro mianakavy. Lavitra azy ireo ny ahiahy ny amin’ny mpanjono na ny zava-manan’aina hafa handany tamingana azy.
Indray maraina anefa akory ny hagagan’ny sasany nandre feo tsy dia fantany loatra. Niara-nirohotra hizaha ny zana-trondro, no gaga nahita biby maintso monto tava mihira eo ambony ravim-boahirana. Ny tohiny eto
Nananjanaka telo mirahalahy Ratataovinarivo, andriana tompomenakely. Andriamatoa dia nambinina, izay noraisin'ny tanany toa mivadika ho harena daholo, hany ka hipokipoka ny valan'ombiny niadanan'izy sy ny ankohonany.Tohiny eto
Neny o ! hoy Raivo, zazavavy kely 7 taona, tsy avelan'ny ankizy miara'milalao aminy aho fa lazainy mikitika ny kilalaony. Mangitika anie izany ny fon-dRanivo mihaino izany... (Tohiny eto)
Karazambiby vehivavy manandrambo izany Ipelamanakofaka izany, ankizy sy biby mirenireny no fototsakafony. Tsy dia matanjaka loatra anefa Ipelamanakofaka fa rehefa alina sy matory olona iny izy no mihaza (Tohiny eto)
Fony taloha hono rankizy malala , ny fianakaviana tsy misaratrano izany fa ao ny dadabeny sy renibeny , dia miaraka ao ny zanany lahy sy ny ankohonany . Ka nahatonga ny razana hiteny hoe : .. (Tohiny eto)
Mosarena hono ny tany tany amin'ny tanana iray atao hoe Fieferana ka tapakevitra ny ankabeazan'ny raimpianakaviana handeha handranto any amin'ny vohitra lavitra, anisan'izany Rafito.
Efa volana maromaro izao no nahararian-dRakala vadiny. Rangahy anefa tsy volovolon'ny mbola hipody....(Tohiny eto)
Fony ankizy dia nitsiriritra mafy ireo ankizy velondray izy ...(Tohiny eto)
Bibibe feno volo izany volovolomanana izany, rehefa maditra ny ankizy dia ampitahorin'ny ray amandreniny hoe aterina any amin'ny Volovolomanana.
Zaza tsy mety nihinambary sady mpitomany lava hono izany Rasoatahadreny.
Taloha elabe hono nisy ankizilahy kely izany te-hanome fanomezana ny reniny . Totokely no anarany.
Ny zavatra fantany fa tian'i neniny dia ny hahazo ny tandroky lalomena hatao firavaka.
Bibibe monina any anaty ranobe i lalomena, ary tsy misy sahy manatona azy fa laniny. ...Ny tohiny eto
NANORO HEVIDRATSY : Ela tokoa no nanirian'ity ramatoa zanaka, ka nony ela tanteraka ny faniriany ka teradahy izy...
Angano vazaha: Fabuleux voyage : Fabuleux voyage avec Orou